Umatshini wokucoca oomileyo wokukhetha nokuthenga kufuneka ube njani?
Njengoko iindawo zokucoca ezicocekileyo zomile zomile, zithintela ngokuthe ngqo ukusebenza kunye nokuphuhliswa kwabahlambisi abomileyo, xa kukhethwa kunye nokuthengwa kwabacoca abacocekileyo ukuze abatyali-mali babe nokunyamekela, kodwa kuba abatyali-mali abaninzi, njengabacebisi abomileyo ukukhetha ukulungiswa kobugcisa akuyona into elula. Ngoko ke, ngaba kufuneka ukhethe kwaye uthenge ngabahlambululi abomileyo?
Okokuqala, ukubona izinto zokusebenza.Izixhobo zokucoca i-dryers ukuqhuba imihla ngemihla ziya kuqhagamshelana nomfaki ococekileyo ococekileyo, ukuba izinto ezisetyenziswayo ezingasifanelanga, ziya kuthintela ngqo kubomi benkonzo abacocayo abomileyo kunye nezinga lokungaphumeleli, ngokubanzi, khetha izinto ezingenasici abacocekileyo abomileyo baninzi.
Okwesibini, yabona ukusebenza.Namhlanje ukuphuhliswa okukhawulezileyo kwishishini lokucoca elomileyo, ukuphuhliswa kwabahlambisi abomileyo kuhlala njalo, ukusebenza kwe-washer eyomileyo kwakhona kukuphuculwe rhoqo kunye neendlela ezintsha, ngokuqhelekileyo, ngokuthetha ngokubanzi, ukusebenza umxhasi oomileyo uphelele ngakumbi, ngokuqinisekileyo ixabiso liphezulu nakhona. Abacoca i-dryer, umzekelo, unomsebenzi ozenzekelayo, ngokuzenzekelayo, ogciniweyo kunye ne-enclosed-closed and so on, kunye ne-oil cleaners kunye ne-tetrachlorethylene ococekileyo ococekileyo, abatyali-mali kufuneka ukwazi ngokubanzi, ngokweentengiso zabo kufuneka ukhethe kwaye uthenge.
Abacoca abacocekileyo ukuba bakhethe oko kufuneka kwenziwe?
Okwesithathu, i-XiJingDu.Kubabathengi, iqondo lokuhlamba iimpahla ezibaluleke kakhulu, ngoko-ke, kumqhubi, kufuneka siyiqwalasele oku, kumatshini ahlambulukileyo, iifayile zizinto ezibalulekileyo ezichaphazela i-XiJingDu, isicatshulwa esahlukileyo sesahlulo kunye ubuninzi becebo lokucoca kunye nenani lezinto ezahlukeneyo, ngokuqhelekileyo uthetha icebo elingaphezulu, ukucoca uluntu lukhulu, lube bhetele. Ngoko ke, abatyali-mali banokuthatha ingqwalasela engakumbi kule nkalo.
Idibeneyo: I-ENEJEAN i-cleaners cleaners
Okwesine, ukuqeqeshwa kunye nokulandela emva kokuthengisa.Ukusebenza kwerhasi elomileyo kunye nobunzima kunzima, kodwa ukuqonda kakuhle kunokwenza ukuba ube nekhokelo lobuchule kunye noqeqesho, abatyali-mali xa bekhetha nokuthenga abacoceli abomileyo, kufuneka ube nolwazi olunzulu olomileyo uqeqesho lwabahlambululi kunye nokuthengiswa emva kweentengiso, ukwenzela ukuba kuqinisekiswe ukuba lula ukuvula ivenkile kwixesha elizayo.
Ngaphezulu, malunga nabacoceli abomileyo bokukhetha nokuthenga ezinye, ukuba ufuna ukwazi ulwazi oluthe xaxa okanye unomdla wokujoyina umatshini wokucoceka oomatshini, unokuqhagamshelana nesevisi yabathengi kwi-inthanethi okanye uphendule amanye amanqaku kule ndawo.
Inqaku lokugqibela: I-ENEJEAN izitya zokuhlamba ez...
Inqaku elilandelayo: Ukukhethwa kwendlela yokwenza ...